ဘဝမှတ်တိုင်: September 2016
Clone ဖုန်းအချို့မှာဖြစ်တက်တဲ့ * တို့ # တို့ကို နှိပ်ရင်မပေါ်တဲ့ ပြသနာ
Clone ဖုန်းတော်တော်များများမှာ * တို့ # တို့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပေါ်မလာတဲ့
error လေးတွေဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင်တော့ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေစစ်တာတို့ /
ငွေဖြည့်တာတို့ကို လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အခက်တွေ့စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ရင်
ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးတစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်တာဟာ ဖုန်းအတွင်းထည့်ထားတဲ့ Phone icon apk ကကိုအဆင်မပြေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျတော်တို့ကဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆို အဲဒီကောင်နေရာမှာအခြား Phone apk တစ်ခုခုကို
ထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးရမှာပါ။ နောက်တစ်ခုထည့်သုံးရမှာဆိုပေမဲ့ အရင်ဟာကိုလည်ဒမဖျက်လိုက်ပါနဲ့
အခြား Phone apk တစ်ခုခုကို Download ရယူပြီး install အခွယ်တကူပြုလုပ်ကာ သုံးလိုက်ရုံပါပဲ။
ကျတော်ကတော့ အဲလိုအလုံးတွေနဲ့ကြုံရင် Rocket Dail ဆိုတဲ့ apk လေးကိုသုံးပါတယ်။
Dual sim ဆိုရင်လည်း Dual sim အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်အောင် support ပေးတဲ့အပြင်
Samsung ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ Phone apk ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပါ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
Clone ဖုန်းများမှာ ကျတော်အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို error တက်ခဲ့ပါက Phone apk တစ်ခုခုကို install
ပြုလုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းကို အသိတစ်ခုဖြစ်စေရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Rocket Dail apk လိုအပ်ပါက >>> ရယူရန် <<<
သီဟထိုက် (ဆွေသဟာ Mobile )
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/22/2016 08:22:00 pm0comments
Mi3WC-Mi4-MiNote_MIUI8_Zawgyi_Installer (No Need Root)
Mi3,Mi3W,Mi3C,Mi4 LTE, Mi4W, Mi Note LTE ,Pink,bamboo တို့မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်
USB debugging ဖွင့်ပြီးကြိုးထိုးထားရုံပါပဲ
Developer: Mr. Ivan @秋叶随风 , Chanmyae.CJ
TWRP Team and Aung Thura.
DL @ http://www.mediafire.com/?7548nv34s0szs42
Posted in: Xiaomi, မြန်မာဖော့င်
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/13/2016 06:20:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/13/2016 06:16:00 am0comments
ဆားဗစ်သမားတွေ၊ ဖုန်းကလိတတ်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမှာပါ... မိမိဥာဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ All In One Tool ပါ...။
ADB PdaNet+ Drivers GET HERE
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/13/2016 06:12:00 am0comments
Android Application တွေကို မိမိကြိုက်သလို ပြင်ဆင်၊ တည်းဖြတ်နိုင်တဲ့ APK Editor လေးပါ... အဆင်ပြေသလို ကလိနိုင်ပါတယ်...။ Cracked ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ဖန်ရှင်းတွေကို အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/13/2016 06:10:00 am0comments
Android Version 5.0 , 5.1.1 ဖုန်းတွေ မြန်မာစာမှန်စေဖို့
Android Version 5.0 to 5.1.1 ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာစာမှန်ဖို့ အတွက်ပါ..
File size 802.2kb ပဲရှိပါတယ်။ PC မှာ Install လုပ်ပီသုံးရပါ့မယ် ဖုန်းမှာ RootAccess ရှိရပါ့မယ်..။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/13/2016 06:09:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/13/2016 06:08:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/13/2016 06:05:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/09/2016 09:38:00 pm0comments
မိမိဖုန်းမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ မြန်မာဖောင့်စာလုံးလှစတိုင် အသစ် (၅) ခု
မြန်မာဖောင့်စာလုံးလှလေးတွေနဲ့ ဖုန်းထဲမှာလန်းချင်သူများ တောင်းဆိုထားတာကြောင့် ဖောင့်စာလုံးလှ အသစ်(၅) ခုကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံတစ်ပုံချင်စီကိုကြည့်ပြီး နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှတစ်ခုချင်း Link ချပေးထားပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/09/2016 09:37:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/09/2016 09:35:00 pm0comments
♪ Samsung ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအတွက် Secret code များ ♫
Samsung ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအတွက် Samsung ရဲ့ secret code များကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖုန်းဝယ်တဲ့အခါမှာ စစ်ဆေးရန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဗဟုသုတရရှိစေရန်ပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
secret code လေးတွေသိတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ လေ့လာလိုက်ကြရအောင် …….
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/09/2016 09:27:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/09/2016 09:18:00 pm0comments
Huawei,Xiaomi,Oppo နှင့်အခြား Qualcomm Chip သုံးတဲ့ဖုန်းတိုင်းစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်ရမှာကတော့ မိမိဖုန်းရဲ့ Diag Port ကို ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းတိုင်းတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး Code တူညီခြင်းမရှိပါပြီး
Huawei ဖုန်းတွေမှာ *#*#2846579#*#* ဖြင့် Diag Port ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
Oppo -> *#08#
Xiaomi -> *#*#717717#*#*
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာတွေကတော့ Phone Call ကနေ Diag Port ကို ဖွင့်တာပါ။
တစ်ချို့ Model တွေမှာ ဖွင့်မရတာမျိုးရှိတက်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ Root ဖောက်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ.
မိမိဖုန်းကို အရင်ဆုံး Root လုပ်ပါ။
ပြီးရင် Miracle Eagle Eye Crack ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
Miracle Eagle Eye Crack 2.27A (Without Box)
0.00 KB 1636 downloads
File Password – yinkoshine
CDMA/Qualcomm/LG Tab ကိုရွေးလိုက်ပါ။
Enable Diag(ADB) ကိုရွေးပြီးဖုန်းကို ကြိုးထိုးပြီး Start Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Done ဆိုပြီးပြရင် Port ဖွင့်ပြီးပါပြီ။
ဒါဆိုရင် အပေါ်က Scan ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါ။ Port တစ်ခုတက်လာပါလိမ့်မယ်။
Mi-Repair IMEI (Mi) ကိုရွေးလိုက်ပါ။ Imei နှစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
မိမိထည့်ချင်တဲ့ Imei1 နဲ့ imei2 မှာ နံပါတ်လေးတွေထည့်ပေးပါ။
ပြီးရင် Start Button ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Reboot ကျပြီးပြန်တက်လာပါက မိမိလိုချင်တဲ့ imei ရပါပြီ။
ဖြိုးချမ်း (Regeneration Mobile Service & Training Center)
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/09/2016 09:16:00 pm0comments